Nezvedu - Chuangxinji Smart Card Co., Ltd.
CXJ Smart boka nhoroondo.
Yakagadzwa muna 2001 gore, Shenzhen Chuangxinji smart kadhi co., Ltd yaive nyanzvi mukugadzira maRFID mawristband, Smart makadhi uye RFID Matagi nezvimwe Vedu Partner vane Vodafone Telecom, Qatar Airlines, Verizon Telecom, Iran Bus kadhi nezvimwe. Tine matatu azvino uye yakakwira standard mutsetse wekugadzira: PVC makadhi ekugadzira mutsetse pamwe nemwedzi kuburitsa zviuru makumi matatu ezviuru zvemakadhi makadhi: Brand-nyowani CTP michina uye brand Heidelberg offset michina yekudhinda, 8 michina inosanganisa RFID Kanyanga kugadzirwa mutsetse pamwe pamwedzi goho zviuru 20,000 zvidimbu: rwakapetwa kumonera michina yekudhinda, kusanganisa michina, michina yekukukurwa nekunyora. RFID zvigadzirwa zvigadzirwa zvekugadzira pamwe nemwedzi kuburitsa zviuru gumi zvemakadhi akachenjera uye makumi matatu emakumi maRFID tag: akachinja masisitimu ekuunganidza michina yekufa michina, laminating michina.Marketing Chikwata Tine vashandi makumi maviri nevatanhatu vekushambadzira vanotaura Chirungu, Germany, France, Spanish, ChiArabic zvichingodaro. bhizinesi rinotangira kubva kuEurope, America, Oceania, Africa, Asia uye nyika dzekumabvazuva nekumatunhu
Tine vashandi vekutengesa 6 vanotaura Chirungu, Germany, Furanzi, ChiSpanish, ChiArabhu zvichingodaro, bhizinesi redu rinotangira kubva kuEurope, America, Oceania, Africa, Asia uye nyika dzekumabvazuva nekumatunhu.
Shenzhen Chuangxinji Smart Card Co., Ltd yakavambwa mumakore 2001, iyo yaive nyanzvi mukugadzira uye kushambadzira kwePV makadhi, NFC wristband Isiri-yekubata infrared Thermometers uye zvigadzirwa zveRFID nezvimwe, Mune matatu emazuva ano uye akakwirira emhando yekugadzira mutsara:
PVC kadhi yekugadzira tambo ine pamwedzi kuburitsa zviuru makumi maviri ezviuru zvemakadhi makadhi: Brand-nyowani CTP michina uye brand Heidelberg offset michina yekudhinda, 8 inosanganisa michina.
Kanyanga kugadzirwa mutsetse pamwe pamwedzi goho zviuru makumi maviri.000 zvidimbu makadhi: rwakapetwa kumonera michina yekudhinda, ichiumbiridza michina, michina yekukukurwa uye zvekutemera.
RFID yekupedzisira chigadzirwa kugadzirwa mutsara pamwe nemwedzi kuburitsa mazana mashanu emamirioni emakadhi akangwara uye 300,000,000 maRFID tag: akadzoreredza kuungana michina mukomboni kufa yekucheka michina, laminating michina.
1.QC kudhinda 2.QC chip's basa.
3.QC yemhando pamberi pepakeji.
Dhizaini kanyanga-- Corrosion kanyanga saizi-- Flip chip - RFID inlay lamination-- Kufa-cheka rfid inlay kana chinamira saizi--
Kudhinda zvigadzirwa maitiro